Imaam Masjid oo lagu dilay Magaalada New York (Daawo Sawirada) | Baydhabo Online
Imaam Masjid oo lagu dilay Magaalada New York (Daawo Sawirada)
Imaamka Masaajidka Degmada Queens ee Magaalada New York iyo nin kale oo la socday, ayaa waxaa Sabtidii lagu toogtay Degmadaasi, xilli ay Salaaddii Duhur ku soo tukadeen Masaajidkaasi, kuna sii jeedeen guryahooda.
Imaamka oo 55 jir ahaa, ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maulama Akonjee, halka ninka kale ee lala dilay oo gacan-yarihiisa ahaa lagu magacaabi jiray Thara Uddin.
Dabley hubeysan oo aan heybtooda la garanayn, ayaa rasaas oodda kaga qaaday xubnahaasi, waxaana weerarka ka dib u suurtagashay inay ka baxsadaan halkaasi. Goobjooge ayaa sheegay ugu yaraan hal nin oo qori ku hubeysnaa uu madaxa ka toogtay Imaamka iyo gacan-yarihiisii.
Ma jirto cid ay xurgufi kala dhaxeysay labada nin ee la dilay, sida ay xaqiijiyeen Saraakiisha Booliska ee Magaalada New York, waxay kaloo sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan cidii ka dambeysay dilkaasi.
Imaamka iyo gacan-yarihiisa, ayaa waxay labaduba u dhasheen Wadanka Bangladesh. Jaaliyadda Bangladesh ee Magaalada New York, ayaa dhigtay isu soo bax ay kaga soo horjeedaan dilkooda.
Dadka reer Bangladesh, ayaa waxay laamaha ammaanka ka codsadeen inay cadaaladda horkeenaan kuwii ka dambeeyay dilka Maulama Akonjee iyo Thara Uddin.
Dadkaan, ayaa waxay cambaarayn dusha kaga tuureen Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga Mareykanka, Donald Trump, ka dib markii ay ku eedeeyeen in uu abuuraayo naceyb ka dhan ah Muslimiinta.
Imaamka Masaajidka Al-furqan Jame, ayaa laba sano ka hor uun soo degay Magaalada New York, ka dib markii uu ka soo guuray Bangladesh.